fanomezana zom-pirenena...? Sao ho lasa fitaovana entin’ny sasany hanangonan-karena - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny vaomiera misahana ny lalàna, ny misahana ny ati-tany sy ny fitsinjarampahefana, sy ny misahana ny fifandraisana amin’ny any ivelany ary ny misahana ny filaminam-bahoaka no tokony nanatrika ity asam-baomiera ity. Araka ny tatitra nataon’ny vaomiera mikasika ny lalàna anefa dia tsy nanatrika izany asam-baomiera izany ireo solombavambahoaka mpikambana ao amin’ny vaomiera misahana ny fifandraisana amin’ny any ivelany (affaires étrangères).
Naroso teo amin’ny fivoriana hitambaram-be ity tolodalàna ity ny talata 1 jona 2021 ka Solombavambahoaka 44 amin’ny 151 no niatrika ny fivoriana ampitain-davitra. Rehefa izany dia tapaka tao fa ahemotra amin’ny fotoana tsy voafetra ny fandinihana ity tolodalàna ity. Fotoana ahafahana mandinika azy tsara ity fanemorana ity mba ahafahana mamantatra sy mandinika izay voalaza ao anatiny.
Ekena fa nofidina hisolo vava ny olompirenena rehetra ireo Solombavambahoaka ary ny Lalampanorenana misy ankehitriny dia manome alalana azy ireo hanolotra sy handany ny lalàna eto amin’ny Repoblika Malagasy. Ankoatran’ny Lalàmpanorenana anefa dia anisan’ny zavatra saropady indrindra ny lalàna mifehy ny zompirenena ka tsy tokony ho raharahan’olontokana na olombitsy izany.
Noho izany ny KMF/CNOE-Fanabeazana Olompirenena dia mangataka:
- Ny hamoahana ampahibemaso mba ho hitan’ny rehetra sy ho azon’ny rehetra vakiana ilay tolodalàna ary atao amin’ny teny malagasy;
- Ny mba hisian’ny rafitra ofisialy handraisan’ny sehatra samihafa anjara amin’ny fandinihana na ny fandrafetana indray ilay tolodalàna toy ny natao tamin’ny fandrafetana ireo lalàna mifehy ny fifidianana.
Manahy manko ny fikambanana fa sao dia ho lasa fitaovana entin’ny sasany hanangonan-karena indrindra eo amin’ny lafin’ny fananantany ny fahazahoana sy fizakana ny zompirenena malagasy. Toe-javatra izay mety hiteraka korontana ara-tsosialy goavana raha ohatra ka tsy voadinika tsara na tsy voafaritra tsara ireo fepetra rehetra ahafahana mizaka ny zompirenena malagasy sy ny tombontsoa aterak’izany. Anisany efa nampatsiahy io ny FFKM tamin’ny fanambarana nataony tamin’ny fankalazana ny Pantekoty lasa teo.
Antananarivo, 2 jona 2021